Magaaladda Garoowe oo si weyn Looga Xusay 17-sano guurada Aasaaska Puntland[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Magaaladda Garoowe oo si weyn Looga Xusay 17-sano guurada Aasaaska Puntland[Sawirro]
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweyne ku xigeenka Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Siciid Xassan Shire ayaa xalay aqalka madaxtooyada Dawladda Puntland ee Garoowe uga qeyb-galay munaasibad balaaran oo lagu xusayey sanadguurada 17-aad ee ka soo wareegatay aasaaskii Puntland.
Wasiiro, Xildhibaano, Waxgarad, Aqoonyahan, Saraakiil ciidan , Siyaasiyiin, , fanaaniinta kooxda waaberi Puntland , Haween , Dhalinyaro iyo dadweyne kale duwan ayaa ka soo qeyb-galay xafladda oo aheyd mid si weyn loo soo agaasimay , waxaana madasha ay ka socotay xafladda ku qornaa halku dhigyo lagu weynaynayo aasaaskii Puntland.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Dawladda Puntland Siciid Xassan Shire oo ka hadlay xafladda ayaa dhammaan shacabka Puntland ugu hambalyeeyey xuska sanadguurada 17-aad ee ka soo wareegatay aasaaskii Puntland.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo madasha ka soo jeediyey khudbad xiiso leh dhinacyo badana taabanaysay ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray dhammaan shacabka Puntland iyo guud ahaan umadda Soomaaliyeed.
Madaxweyne Gaas ayaa sidookale sheegay in Puntland la dhiso ay faa’iido weyn u aheyd guud ahaan umadda Soomaaliyeed, dadbadana ay u soo qaxeen dhulkaan iyagoona helay deganaansho iyo soo dhaweyn wanaagsan oo aysan ka heli laheyn meelkale.
’Puntland wax badan ayaa u qabsoomay Puntland waxay leedahay Dawladnimo gaamurtay oo cudud dhaqaale iyo sidookale Ciidan ku filan,Puntland waa Dawlada keliya ee sharciyad leh ee ka jirta Soomaaliya’’Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
‘’Dad badan oo reer Puntland waxay qabaan inay Puntland ka tashato Soomaali oo ay isku tashato,laakiin aysan Soomaalinimo waqti ku lumin,laakiin waxaan leeyahay in badan oo ka mid ah Cadowga Soomaaliya sidaas ayay doonayaan,Puntland kaligeed ayaa Soomaaliya noqonaysaa hadaan Soomaalinimada jiritaankeeda laga wada shaqeyn’’Ayuu hadalkiisa sii raaciyey madaxweynuhu.
Ciidanka Puntland ayuu madaxweynuhu ugu hambalyeeyey doorka lama ilaawaanka ah ee ay ka qaataan amniga iyo jiritaanka Puntland, waxaana uu ku tilmaamay in ay yihiin kuwa had iyo jeer cadowga inaga xigsanaya una soo jeeda ilaalinta amniga Puntland.
Madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay in xalay laga bilaabo ay tahay sanadka ladagaalanka musuqmaasuqa, hay’adda Asteynta maamul wanaaga iyo ladagaalanka musuqmaasuqa ayuuna ugu baaqay inay derdergeliyaan howlaha muhiimka ee ay u hayaan shacabka Puntland, waxaana uu sidookale sheegay in dhammaan Gobolada Puntland lagu raja weyn yahay in laga furo xafiisyo ururinaya xogaha ku saabsan musuqmaasuqa si loo ciribtiro.
Madaxweyne Gaas waxaa uu sidookale sheegay in Puntland ay ka gudbi doonto nidaamka ku dhisan qabiilka, ayna dhawaan u talaabsan doonto Nidaamka Dimuqraadiyadda, isagoona xusay in uu socdo dadaalkii ugu dambeeyey ee nidaamkaasi looga talaabsan lahaa.
Maamulada Galmudug iyo Ahlusunna oo si rasmi ah ugu heshiiyay Dhuusamareeb[Sawirro]
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo Baaraysa Qoyas laga barakaciyay xero ay deganaayeen
Madaxweyne Farmaajo oo kulamo la qaatay Bulshada Rayidka ah magaalada Dhuusamareeb
Shirkii Galmudug iyo Ahlusunna ee magaalada Dhuusamareeb oo dib loo dhigay[Warbixin]
Ra’iisal Wasaaraha Kheyre oo ka qeybgalay kulan looga hadlayay Gargaarka bini’aadanimo ee Soomaaliya[Sawirro]